ओपिओडहरूको सूची: प्रयोगहरू, साधारण ब्रान्डहरू, र सुरक्षा जानकारी - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, समाचार समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण मनोरञ्जन कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण समुदाय, कम्पनी कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> औषधि जानकारी >> ओपिओडहरूको सूची: प्रयोगहरू, साधारण ब्रान्डहरू, र सुरक्षा जानकारी
ड्रग इन्फो ओपिओइड्सले मस्तिष्कको यात्रा गर्ने सिग्नलहरू ब्लक गरेर काम गर्दछ जुन पीडा दर्ता गर्दछ। ओपिओइड प्रयोग र सुरक्षाको बारेमा यहाँ अधिक जान्नुहोस्।
ओपिओइड सूची | ओपियोड्स के हुन्? | कसरी उनीहरू काम गर्छन् | उपयोगहरु | कसले ओपिओइड लिन सक्छ? | सुरक्षा | साइड इफेक्ट | लागत
दुखाई व्यवस्थापन आजको स्वास्थ्य सेवामा धेरै ध्यान प्राप्त गर्ने विषय हो। एक व्यक्ति सबैभन्दा सामान्य कारण औषधि पसलमा जान्छ पीडा औषधि प्राप्त गर्न। ड्रग्स जसले दुखाइ कम गर्दछ भनिन्छ एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिकहरू ओभर-द-काउन्टर र पर्चे द्वारा उपलब्ध छन्। त्यसो भए तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ कि कुन एनाल्जेसिक उपयुक्त छ तपाइँको दुखाइ? यो प्रभावी दुखाइ प्रबन्धनको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
गम्भीर पीडाको लागि - शल्यक्रिया वा एक दर्दनाक चोटपटक पछि, उदाहरणका लागि - ओपीओइड्स पीडा राहतको लागि सबैभन्दा प्रभावशाली एनाल्जेसिकहरू हुन्। यदि तपाईंले कहिल्यै हड्डी भाँच्नु भएको छ वा तपाईंको विद्वान दाँत हटाएको छ भने, तपाईं केही ब्रान्ड-नाम प्रिस्क्रिप्शन ओपिओइडहरू जस्तै पर्कोसेट, लोरट्याब, वा टाईलोल # with सँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ। यस लेखमा, हामी ओपिओइड औषधिहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण विवरणहरूको समीक्षा गर्नेछौं - साथै तिनीहरूको सम्पत्ति, साझा ब्रान्ड नाम, र सुरक्षित प्रयोग।
सामान्य नाम ब्रान्ड नामहरू औसत नगद मूल्य एकलकेयर बचत अझै सिक
एसिटामिनोफेन-कोडिन #3Tylenol #320 १.9.2२ प्रति २०, -30००--30० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
बुप्रिनोर्फिन बुप्रेनेक्स, सब्युटेक्स, बुट्रान्स, बेलबुका 10 .4२..48 प्रति १०, mg मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
फेन्टानेल एक्टिक, सार, दुर्जेसिक, फेंटोरा, सब्सि 10 १9 per प्रति १०, २ m एमसीजी / घन्टा प्याचहरू कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
हाइड्रोकोडोन-एसिटामिनोफेन नोर्को, लोर्ताब, लोरसेट, क्जोडल, हाइसेट 12 १..7373 प्रति १२, -3--3२ mg मिलीग्राम ट्याब्लेट कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
हाइड्रोकोडोन बिटरेटरेट जोहिड्रो ईआर, हिसिंगला ईआर 30 २33 प्रति ,०, १० मिलीग्राम क्याप्सूल कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
हाइड्रोकोडोन-होमाट्रोपाइन Hycodan, Hydromet 30 .5$.2२ प्रति ,०, -1-१..5 मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू कुपन (ट्याब्लेट) पाउनुहोस्
कुपनहरू प्राप्त गर्नुहोस् (तरल) अझै सिक
हाइड्रोमोरफोन Dilaudid, Exalgo 30 २१.१5 प्रति ,०, २ मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
मेपेरीडाइन डिमेरोल Mg 90.०० प्रति m० मिलीग्राम / एमएलको १ एमएल कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
मेथाडोन डोलोफिन, मेथाडोज, डिस्केटहरू 90 .२.84 per प्रति 90 ०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेट कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
मोर्फिन (विस्तारित-रिलीज) कादान, एमएस कन्टिन्ट, मोर्फहाब्ड 60 .2$.२6 प्रति ,०, १ mg मिलीग्राम ट्याब्लेट कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
मोर्फिन सल्फेट (तत्काल रिलीज) रोक्सानोल (बन्द) 60 .3१.77 प्रति ,०, १ mg मिलीग्राम ट्याब्लेट कुपन (ट्याब्लेट) पाउनुहोस्
ऑक्सीकोडोन-एसिटामिनोफेन पर्कोसेट, एन्डोसेट, रोक्सिकेट, जारटेमिस एक्सआर 12 १..१० प्रति १२, -3--3२ mg मिलीग्राम ट्याब्लेट कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
ऑक्सीकोडोन-एस्पिरिन पर्कोडन, एन्डोडन 120 २44 प्रति १२०, 83.8383--325 mg मिलीग्राम ट्याब्लेट कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
ऑक्सीकोडोन (तत्काल रिलीज) ओक्साडो, रोक्सिकोडोन 120 ११$ प्रति १२०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेट कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
ऑक्सीकोडोन (विस्तारित-रिलीज) Oxycontin, Xtampza ER 60 6१6 प्रति ,०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
टेपेन्टाडोल नुकिन्टा, नुकिन्टा ईआर 30 २44.77 प्रति ,०, mg० मिलीग्राम ट्याब्लेट कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
ट्रामाडोल अल्ट्राम 60 .1$.१4 प्रति ,०, mg० मिलीग्राम ट्याब्लेट कुपनहरू पाउनुहोस् अझै सिक
डुरामोर्फ (इंजेक्शन मार्फिन)
ऑक्सीकोडोन र नालोक्सोन (टार्जिनिक ईआर)
तल केही ओपिओइड औषधिहरू छन् जुन दु: ख बाहेक अन्य सर्तहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
पखाला को लागी अफिम टिंचर
डाईरियाको लागि लोपेरामाइड (इमोडियम)
डाइफेरोनको लागि डिफेनोक्साइलेट-एट्रोपाइन (लोमोटिल)
खोकीको लागि हाइड्रोकोडोन-क्लोरफेनिरामाइन (भिटुज)
ओपिओइड प्रयोग विकारको लागि बुप्रेनोरोफिन-नालोक्सोन (सुबोक्सोन, जुब्सोलभ)
ओपियोड्स के हुन्?
ओपियोइड्स ड्रग्सको एक वर्ग हो जुन मध्यमदेखि गम्भीर पीडा कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। ओपिओइडलाई ड्रग्स पनि भनिन्छ। मादक पदार्थ भन्ने शब्द केही व्यक्तिले अवैध लागूपदार्थको लागि प्रयोग गरेको छ, तर प्राविधिक रूपमा यसले ओपिओइडलाई जनाउँछ। संघीय र राज्य कानून बमोजिम जारी गरिएको प्रिस्क्रिप्शनको साथ खरीद गर्दा ओपिओइडहरू वैध हुन्छन्।
कसरी खमीर संक्रमण को लागी दही सम्मिलित गर्ने
ओपिओइडहरू प्राकृतिक रूपमा देखा पर्दछन्; अफीम, मोर्फिन, र कोडिन एशियाली अफीम पोप प्लान्टबाट लिइएको हो। सिंथेटिक ओपिओइड एक प्रयोगशालामा परिमार्जन गरिएको छ। यसमा अक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, फेंट्यानल, र अन्य धेरै समावेश छन्।
ओपिओइडले कसरी काम गर्छ?
हाम्रो शरीरमा स्वाभाविक रूपमा हुने ओपियोइडहरू हुन्छन् जसलाई एन्डोरफिनहरू भनिन्छ। एन्डोरफिनहरूले स्नायु प्रणालीमा केहि रिसेप्टर्स बाइन्ड र सक्रिय गर्दछ। सामूहिक रूपमा, विभिन्न रिसेप्टर्सहरूलाई ओपिओइड रिसेप्टर्स भनिन्छ। जब सक्रिय हुन्छ, रिसेप्टर्सले मस्तिष्कको लागि दर्ता गर्ने संकेतहरू रोकिन्छ जुन पीडा दर्ता गर्दछ। सुस्त दुखाइको थपमा, यसले शान्ति र आनन्दको भावना सिर्जना गर्न सक्दछ।
एक साधारण अवस्था जसमा एन्डोरफिनहरूले यो प्रभाव सिर्जना गर्दछ व्यायामको बेला। ओपिओइड ड्रग्सले शरीरको एन्डोरफिनहरूको नक्कल गर्दछ ओपियोइड रिसेप्टर्सलाई अझ बढी डिग्री सक्रिय गरेर। केहि ओपिओइड ड्रग्सको प्रभाव छिटो हुन्छ। यिनीहरू सफलता पीडाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ (गम्भीर पीडा जुन तुलनात्मक रूपमा छोटो समयमा रहन्छ)।
विस्तारित-रिलीज ओपिओइडले अधिक बिस्तारै काम गर्दछ तर लामो अवधिको लागि। यी प्राय: दिन वा रात भर कम दुखाई स्कोर गर्न मद्दतको लागि प्रयोग गरिन्छ जबकि तुरुन्त-रिलीज हुने ओपिओइड्सको प्रयोग घटाउँदछन्, जुन बानी हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
ओपियोड्स केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
ओपियोड्स मध्यमदेखि गम्भीर दुखाईको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। निम्नलिखित चिकित्सा परिदृश्यहरू ओपिओइड प्रयोगको साथ सामान्य रूपमा सम्बन्धित छ।
क्यान्सर ल्युकेमिया , प्रोस्टेट क्यान्सर , पेटको क्यान्सर , स्तन क्यान्सर , र अन्य
गठिया (psoriatic गठिया, संधिशोथ, र ओस्टियोआर्थराइटिस सहित)
ओपिओइड प्रयोग विकार
शल्य चिकित्सा पछि दुखाई
मृगौला ढु stones्गा
माइग्रेन टाउको दुखाई
Musculoskeletal पीडा (जस्तै तल्लो पीठ दुख्ने )
सानो खुराकमा ओपिओइड उपचारको लागि अन्य सामग्रीहरूसँग मिसाइन्छ खोकी वा पखाला ।
कसले ओपिओइड लिन सक्छ?
शिशुहरू, बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरू
शल्यक्रिया पछि पीडा कम गर्न बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूलाई ओपिओइड्स दिइन्छ। सबै ओपिओइडहरू यस उमेर समूहका लागि उपयुक्त छैनन्। फेन्टानेल, मोर्फिन, र मेथाडोन सबै उमेरहरूमा प्रयोग गरिन्छ। अक्सीकोडोन र हाइड्रोमोरफोन6महिना भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूमा प्रयोगको लागि संकेत गरीएको छैन। हाइड्रोकोडोन २ बर्ष भन्दा कम उमेरका बिरामीहरूमा प्रयोगको लागि संकेत गरीएको छैन।
२०१ 2017 मा, एफडीए बच्चाहरूमा कोडिन र ट्रामाडोलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो , सास फेर्ने गम्भीर जटिलताको कारण। विशेष रूपमा, कोडिन १२ बर्ष भन्दा कमका बच्चाहरूमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, र ट्रामाडोल १ 18 बर्ष भन्दा कमका बच्चाहरूमा प्रयोग हुनुहुन्न। विषाक्त मेटाबोलिट संचयको कारणले बाल रोगीहरूमा मेपेरिडिन सिफारिस गरिदैन जुन विशेष गरी कमजोर मिर्गौला समारोहको साथमा।
ओपोयोड्स वयस्कहरूमा प्रयोग गर्न सुरक्षित छन् यदि तिनीहरू छोटो अवधिको लागि लिईन्छन् र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकद्वारा सिफारिस गरे अनुसार। सबै भन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (CNS) डिप्रेशनको परिणाम हो, जसमा उनी निन्द्रा, बेहोरा, र साइकोमोटर कमजोरी। केही बिरामीहरूले मेमोरी कमजोरी वा भ्रमको अनुभव गर्न सक्दछन्। ओपिओइडहरू प्रयोग गर्ने सबै मानिसहरूले ओपिओइड निर्भरता, लत र ओभरडोजको लागि अन्तर्निहित जोखिम बुझ्नुपर्दछ। यी जोखिमहरू बढाइन्छ जब ओपियोड्सको दुरुपयोग हुन्छ।
ओपिओइड प्रयोग पनि जब सम्भावित जनसंख्यामा सम्भव छ बेवास्ता गर्नुपर्छ। बुढेसकालमा ओपियोइड्सको प्रयोगले झरनाको खतरा धेरै बढाउँदछ, किनकि यसले अटाक्सिया, बिग्रेको साइकोमोटर समारोह, र सिनकोप पैदा गर्न सक्छ। यदि कुनै सुरक्षित विकल्पहरू उपलब्ध छैनन् भने, ओपिओइडहरू सब भन्दा कम प्रभावकारी खुराकमा निर्धारित गर्न सकिन्छ - सामान्यतया २ dose% देखि %०% वयस्कको खुराक — र त्यसपछि सहिष्णुताको आधारमा समायोजित हुन्छ।
दुई ओपियोइडसँग जनावरहरूमा प्रयोगको लागि एफडीए स्वीकृति छ; buprenorphine बिरालाहरु को उपयोग को लागी स्वीकृत छ, जबकि butorphanol बिरालाहरु, कुकुर, र घोडा मा प्रयोग को लागी अनुमोदित छ। पशुचिकित्सकहरूले सामान्य रूपमा घरपालुवा जनावरहरूको लागि ओपिओइडहरू 'अफ-लेबल' लेख्दछन्। उदाहरण को लागी, हाइड्रोकोडोन कुकुरहरु मा दुखाई र खोकी को उपचार गर्न प्रयोग गरीन्छ। ट्रामाडोल प्राय: कुकुर र बिरालाहरूको दुखाइ प्रबन्ध गर्न सिफारिस गरिन्छ।
के ओपियोइडहरू सुरक्षित छन्?
सबै ओपियोइड्सले ओपिओड लत, दुरुपयोग, र दुरुपयोगको लागि केही जोखिम बोक्दछ। लागूऔषध दुर्व्यवहार मा राष्ट्रीय संस्थान रिपोर्टहरू कि २ लाख भन्दा बढी अमेरिकीहरू ओपियोड्सको दुरुपयोग गर्छन् र अमेरिकामा दैनिक 90 ०० भन्दा बढी ओपिओइड ओभरडोज मृत्यु हुन्छ। फराकिलो ओपिओइड दुरुपयोग र अधिक-लेखन एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट हो जसलाई सामान्य रूपमा भनिन्छ ओपियोइड महामारी । ओपिओइड दुरुपयोगको जोखिमलाई कम गर्न, संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) ले बिरामी र सल्लाहकारहरूलाई उनीहरूको सुरक्षित प्रयोगको मार्गदर्शन गर्न धेरै कदमहरू चालिसकेको छ।
२०१ 2016 मा, एफडीएले एक घोषणा गर्‍यो नयाँ आवश्यकता तत्काल रिलीज हुने ओपियोइडले उनीहरूको लेबलि warningमा कालो बक्स चेतावनी समावेश गर्दछ, उनीहरूको दुरुपयोग र दुरुपयोगको जोखिमको बखान गर्दछ, जसले नशा, अधिक मात्रा र मृत्यु निम्त्याउन सक्छ।
उही वर्ष, एफडीए को लागी एक कालो बक्स चेतावनी ओपियोड्सका लागि बेन्जोडाइजेपाइनहरू सहित अन्य केन्द्रीय स्नायु प्रणाली डिप्रेसनन्टहरूको साथ ओपियोइड्सको प्रयोगको जोखिमलाई रेखांकित गर्दछ। ड्रगका यी दुई अलग वर्ग, जब सँगै लिइन्छ, गहिरो बेहोरा, श्वासप्रश्वास उदासीनता, कोमा र मृत्युको परिणाम हुन सक्छ।
२०२० मा, एफडीएलाई आवाश्यक पर्‍यो ओपिओइडहरूको लागि लेबलिमा एक सिफारिस समावेश छ Naloxone को उपयोग को बारे मा एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर संग कुरा गर्न - एक antidote ओपिओइड ओभरडोज उपचार को लागी प्रयोग।
ओपियोड्सको दीर्घकालीन प्रयोग हो अब लामो समयसम्म पीडाको लागि सिफारिश गरिएको छैन क्यान्सर सम्बन्धित पीडा बाहेक। वास्तवमा, ओपियोड्सको दीर्घकालीन प्रयोगले केही प्रकारको पुरानो पीडालाई नराम्रो बनाउँदछ र बिरामीहरूलाई ओपिओइड निर्भरताका लागि बढी जोखिममा पार्छ।
जब राम्रोसँग प्रयोग हुन्छ, ओपियोइड्सको छोटो अवधिको मेडिकल प्रयोग सुरक्षित हुन सक्छ र विरलै निर्भरतामा परिणाम दिन्छ। अधिक मात्राबाट बच्न, जहिले पनि प्याकेज लेबलिंगमा निर्देशन अनुसार ओपिओड्स प्रशासन गर्नुहोस्।
कुनै पनि बेचिएको औषधि फिर्ता लिनका लागि उत्तरदायी छ यदि निर्माता वा नियामक प्राधिकरणहरू सचेत भए कि यो दोषपूर्ण वा सम्भावित हानिकारक हुन सक्छ। तल अफिओइड उत्पादनहरूको लागि जारी भर्खरका सम्झनाहरू छन्:
होस्पिरा, Inc. तिनीहरूको हाइड्रोमोरफोन ईन्जेसन याद भयो अप्रिल १,, २०२०, खाली वा क्र्याक ग्लास शीशाहरूको सम्भावनाको कारण। सबै प्रभावित उत्पादनहरूको म्याद सकिएको छ।
अल्भोजन तिनीहरूको फेन्टानेल ट्रान्सडर्मल प्याचहरू सम्झियो जुलाई २०१ in मा उत्पादन मिसलबेलिंगको कारण। थोरै संख्यामा डिब्बाहरूमा गलत शक्तिको फन्ट्यानेल प्याचहरू थिए। सबै प्रभावित उत्पादनहरूको म्याद सकिएको छ।
PharMEDium सेवाहरू, LLC तिनीहरूको हाइड्रोमोरफोन ईन्जेसन याद भयो सल्फाइट the लेबलिंग जानकारी को उपस्थिति को कारण उत्पादन को लागी उत्पादन सल्फाइट रहित दाबी गरीयो। सल्फाइटको एक्सपोजरले सल्फाइट एलर्जीको साथ बिरामीहरूमा गम्भीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्छ। सबै प्रभावित उत्पादनहरूको म्याद सकिएको छ।
ओपिओइडहरूलाई बिरामीहरूमा पदार्थको प्रयोगको इतिहास वा पर्चेको औषधि दुर्व्यवहारको इतिहासका साथ बेवास्ता गर्नुपर्दछ किनकि उनीहरूसँग बानी बन्ने सम्भावना छ।
कुनै पनि ओपिओइड औषधि लिनेमा अत्यधिक सावधानी अपनाउनुहोस् यदि तपाईंसँग कहिल्यै ओपिओइडमा गम्भीर अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रिया आएको छ। ओपिआइड्सलाई हिस्टामाइनको रिलिज गर्नका लागि सामान्य छ, परिणामस्वरूप खुजली हुन्छ। यो साँचो एलर्जी होईन। ओपिओइड एजेन्टहरूको लागि साँचो एलर्जीमा एनाफिलाक्सिस वा एंजियोएडेमा समावेश छ। उनीहरूको रासायनिक संरचनामा समानताहरूको कारणले, यो अपमानजनक एजेन्ट बाहेक अन्य ओपियोइडसँग क्रस-संवेदनशीलता अनुभव गर्न सम्भव छ।
ओपोइड्स एक श्वासप्रश्वास अवस्थाका बिरामीहरूमा प्रयोग गरिनु हुँदैन किनकि ओपोइडले श्वासप्रश्वासलाई उदासिन बनाउँदछ।
ओपियोइडहरू ज्ञात वा संदिग्ध ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल (जीआई) अवरोधका बिरामीहरूमा प्याराइटिक इलियस सहित प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनकि ओपियोइडले जीआई ट्र्याक्टको गतिशीलता घटाउन सक्छ।
कलेजो वा मृगौला रोगका बिरामीहरूलाई ओपिओइड्समा नजिकबाट अनुगमन गरिनु पर्छ। सीएनएस डिप्रेशनको खतरनाक स्तरहरूबाट बच्नको लागि उनीहरूको खुराकहरू समायोजित हुन आवश्यक छ।
के तपाईं गर्भवती वा स्तनपान गराउँदा ओपिओइड लिन सक्नुहुन्छ?
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरू (CDC) ले ओपिओइड प्रयोगको बिरूद्ध सिफारिस गर्दछ जब गर्भवती वा स्तनपान गराउन यदि सुरक्षित विकल्पहरू सम्भव छ भने। दुरुपयोग (जो आमालाई हानि पुर्‍याउन सक्छ) को जोखिम बाहेक, गर्भावस्थामा वा स्तनपान गर्दा ओपोइडको लामो प्रयोगले बच्चालाई हानी गर्दछ। ओपियोइडहरूले प्लेसेन्टालाई पार गर्दछ, त्यसैले नवजातहरू तिनीहरूको प्रभावहरूमा पर्दछन्। सीडीसीका अनुसार यसले प्रारम्भिक जन्म, भ्रुणको न्यून वृद्धि, र जन्म दोष (न्यूरल ट्यूब दोष, जलबिन्दु, पेट दोष, र जन्मजात हृदय दोष सहित) को परिणाम गर्न सक्छ। नवजात शिशुको निर्भरता र फिर्ताको विकास गर्न गर्भावस्थामा शिशुहरूलाई ओपिओइडको सम्पर्कमा ल्याउनु सामान्य हो।
ओपिओइड निकासीको लक्षणमा बान्ता, पखाला, तौल प्राप्त गर्न असफलता, उच्च पिड रोएको, असामान्य निद्रा बान्की, चिड़चिड़ापन, अति सक्रियता, र कम्पनहरू समावेश छन्। प्रारम्भिक उपचारबिना यो अवस्था जीवन खतरामा हुन सक्छ। गम्भिरता मातृ खुराक र आवृत्तिमा निर्भर गर्दछ।
के ओपियोड्स नियन्त्रित पदार्थ हो?
दुरुपयोग र दुरुपयोगको उनीहरूको सम्भावनाको कारण, ओपिओइडहरूलाई संयुक्त राज्य औषधि प्रवर्तन एजेन्सी (डीईए) द्वारा नियन्त्रित पदार्थको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। लगभग सबै ओपिओइडहरू तालिका दोस्रो नियन्त्रित पदार्थहरूको रूपमा सूचीबद्ध छन्। यस कोटीका ड्रग्स सबै प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को अत्यधिक उच्च नियमित छ। त्यहाँ केहि अपवादहरू छन्, जस्तै बुप्रेनोर्फिन, ट्रामाडोल, र एसिटामिनोफेन-कोडिन। यी अझै नियन्त्रणित पदार्थहरू हुन् तर तिनीहरूको प्रयोगमा कम प्रतिबन्धहरू छन्। तालिका प्रणाली, र प्रत्येक तालिकामा तोकिएको विशेष औषधिहरू राज्य नियन्त्रित पदार्थ अधिनियमहरूको अनुसार राज्यहरू बीच भिन्न हुन सक्दछ।
सामान्य ओपियोइड साइड इफेक्ट
सबै ओपिओइड औषधिहरूमा बहु साइड इफेक्टहरू सामान्य छन्। यी प्रतिकूल प्रभावहरू मध्ये धेरै CNS डिप्रेशनको परिणाम हुन्। यी साइड इफेक्टहरू अन्य पदार्थहरू द्वारा बढाउन सकिन्छ जसले सीएनएस डिप्रेसन निम्त्याउँछ, जस्तै बन्जोडियाजेपाइन, मदिरा, र बार्बिटरेट्स। यसमा समावेश छन्:
डिस्प्निया (सास फेर्न गाह्रो)
ओपिओइड औषधीहरूले पनि जठरांत्रको मार्गलाई सुस्त बनाउँछ। यसले साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँछ जस्तै:
मतली / बान्ता
ओपियोइड्सले हिस्टामाइनको विमोचनको कारण गर्दछ, परिणाम:
यदि तपाइँ एक विस्तारित अवधि को लागी एक ओपियोइड औषधि लिई रहनु भएको छ भने, तपाइँ अचानक बन्द गर्नु हुँदैन किनकि तपाइँले फिर्ती लक्षणहरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको चिकित्सकले ढिलो सुरक्षित तरीकाले ड्रग लाई सुरक्षित गर्नका लागि मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ।
ओपिओइडको कति खर्च हुन्छ?
धेरै ओपिओइडहरू सस्तो मूल्यमा सामान्य रूपमा उपलब्ध छन्, सामान्यतया $ २० भन्दा कमको साथ एकलकेयर कूपन । यस मूल्य दायरामा केहि सामान्य ओपिओइडहरूले ट्रामाडोल, अक्सीकोडोन, बुप्रिनोर्फिन ट्याब्लेटहरू, र जेनेरिक पर्कोसेट, लोरट्याब, र टाइलनोल # include समावेश गर्दछ। केहि ओपिओइड धेरै महँगो हुन्छन्।
उदाहरण को लागी, oxymorphone सामान्यतया जेनेरिक को लागी $ 500 भन्दा अधिक (वा एक सिंगलकेयर कूपनको साथ 1 १११.1१) को लागी लागत। केहि ओपिओइडहरू, जस्तै नुकिन्टा, केवल ब्रान्ड नामको मार्केटि— गरिन्छ, जसले उनीहरूलाई महँगो बनाउँदछ (न्यूकेन्टा प्रायः खुद्रा फार्मेसीहरूमा -० दिनको आपूर्तिको लागि around २44 को आसपास छ)।
बीमा योजनाहरूले सामान्यतया टायर १ मा प्राय: जेनेरिक ओपियोइडहरूको सूची दिन्छ, जुन औषधीको सबैभन्दा कम लागतको तह हो।
बीमा योजना अक्सर एक ओपिओइड औषधि को कति निश्चित गर्न को लागी सीमित हुन्छ। बिरामी कम्पनीमा डाक्टरहरूले पहिले प्राधिकरण फारम बुझाउन सक्दछन् यदि बिरामीले योजनाले साधारणतया अनुमति दिए भन्दा अधिक डोज आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, धेरै बीमा योजनाहरु केवल एक--दिन आपूर्ति कभर हुनेछ पहिलो पटक एक हितग्राही आफ्नो स्वास्थ्य योजना को उपयोग गर्दा एक ओपिओइड प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त गर्दछ।
अन्य कभरेज सीमितताहरू उपचार गरिरहेको अवस्थामा निर्भर हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, मेथाडोन एक चिकित्सा योजना द्वारा कभर गरिएको छ र फार्मेसी कभरेजको माध्यमबाट होइन यदि यो व्यसन उपचारको लागि प्रयोग भइरहेको छ, पीडाको सट्टामा।
तपाईंले आफ्नो ओपिओइड प्रिस्क्रिप्शन भर्नु अघि, एकलकेयरको साथ जाँच गर्नुहोस् निश्चित गर्न कि तपाईं न्यूनतम सम्भावित मूल्य तिर्दै हुनुहुन्छ।
ओपिओइड लत , मद्दत
गर्भावस्थाको दौरान ओपिओइड प्रयोगको बारेमा , CDC
ओपिओइड एनाल्जेसिकहरूसँग मातृ उपचार र जन्म दोषहरूको लागि जोखिम , CDC
AGS बियर मापदण्ड , अमेरिकी जेरियाट्रिक्स समाजको जर्नल
ओपिओइड दुरुपयोग , एनेस्थेसियोलोजिष्टहरूको अमेरिकी समाज
बच्चाहरूमा ओपिओइड प्रयोग , पेडियाट्रिक फार्माकोलजी र चिकित्सकीय जर्नल
रगत मा उच्च creatinine स्तर को लागी कारणहरु
योजना बी साइड इफेक्ट पछिल्लो कति लामो
म levothyroxine संग एक मल्टीविटामिन लिन सक्नुहुन्छ?
मँ सुत्नु भन्दा पहिले कति मेलाटोनिन लिनु पर्छ
खाना भन्दा पहिले सामान्य रक्त शर्करा के हो
कहिले सम्म xanax xr मा किक गर्न को लागी